(သား) သုခရဲ့ အားဆေးတစ်ခွက် ~ Myo Chit Myanmar
Please click on photo to ENLARGE!
သုခ(သား) (ခ) ကိုရဲအောင်သည် နိုင်ငံရပ်ခြား၌ နေထိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ယခု မြန်မာပြည်သို့ရောက်ရှိခိုက် ဖခင်ဖြစ်သူ ဘဘဦးသုခ မျိုးစေ့ချပေးခဲ့သော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်လေ့လာမှုပြုပြီးနောက် အလှူငွေ ၁၅၀၀၀၀/- ကျပ်အား သဒ္ဓါထက်သန်စွာဖြင့် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ရန်ကုန်)သို့လည်း လူနာ များအား ဆေးဝါးကုသမှုတို့ကို လိုက်လံလေ့လာခဲ့သည်။ သုခ(သား) (ခ) ကိုရဲအောင်သည် မိဝေး ဖဝေး ရဟန်းသံဃာ ဆရာသမားများနှင့် ဝေးလံသော နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်နေသော်လည်း မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လူငယ်တို့အတွက် ဘ၀ရပ်တည်ချက်စာပေများ၊ ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ် ဆောက်တည်သောလူများ၊ ဆောက်တည်ရကောင်းမှန်း မသိသောသူများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရား ခြားနားမှု ဆောင်းပါးများနှင့် လူမှုအကျိုးဆောင်၊ လူငယ်ပြုပြင်ရေးများကို ရေးသားနေသော ဘဘ ဦးသုခ၏ စာပေမျိုးစေ့ဖြစ်သော သုခ(သား) အမည်ဖြင့် ရေးသားနေသော စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်နှင့်အညီ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ရန်ကုန်)တို့တွင် လိုအပ်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများ၊ အကူ အညီများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုလည်း ပြောကြားသွားသည်။
ဘဘဦးသုခ မျိုးစေ့ချထူထောင်ခဲ့သော နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ တိုးတက် မြင့်မားမှုများနှင့် အများပြည်သူတို့အပေါ် ထိရောက်သောကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပေး ခြင်းတို့အပေါ် သုခ(သား) (ခ) ကိုရဲအောင်သည် များစွာကျေနပ် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ကာ သာဓု … သာဓု … သာဓုဟု ခေါ်ဆိုသွားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ဘဘဦးသုခ မျိုးစေ့ချထူထောင်ပေးခဲ့သော နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ ရှင်သန်တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နေကြဆဲအချိန်တွင် အတိုက်အခိုက် အနှောင့် အယှက် အဟန့်အတားများ ကြုံကြိုက်ခံစားနေရစဉ် ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်သော ဘဘဦးသုခအား ရည်မှန်းတောင်းတအောက်မေ့နေဆဲ ဘဘဦးသုခ၏ ရင်သွေးဖြစ်သူ သုခ(သား) (ခ) ကိုရဲအောင် ရောက်ရှိလာခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် မဟာအားဆေးတစ်ခွက် သောက်သုံးလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
အဘလမ်းပြခဲ့တဲ့ . . . အမွေ
အဘလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ . . . အမွေ
အဘဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ . . . အမွေ
အဘမျိုးစေ့ချခဲ့တဲ့ . . . အမွေ
အဘရဲ့အမွေ . . . အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေ . . . အားလုံးပိုင်တဲ့အမွေ
ဒီအမွေကို . . . အပွန်းအပဲ့မခံနိုင်
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ . . . အမွေ။
အဘရဲ့အမွေကို တိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့အလုပ်။
အဘရဲ့အမွေကို မြှင့်မားလာအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့တာဝန်။
အဘရဲ့အမွေကို ဂုဏ်ရှိန်မြှင့်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ဝတ္တရား။
အဘရဲ့အမွေကို သမိုင်းထူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့အဓိဋ္ဌာန်။
ဒီအမွေကို . . . ထိပါးစော်ကား အနိုင်ကျင့်လာရင်တော့
ဗြဟ္မစိုရ်တရား လက်ကိုင်မထားနိုင်တော့ . . . သွေး သွေးခြင်း၊
အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အဘရဲ့ အမွေသည် ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေကြောင့်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
Posted in: Article,Literature,Photo,Social Community Article